စံထားရတဲ့ အိုငျဒေါရဲ့ ဆုပေးအပျခွငျးခံရတာမို့ နှဈဆပြျောခဲ့ရတယျလို့ ဆိုလာတဲ့ ဇာဏျခီ – Askstyle
စံထားရတဲ့ အိုငျဒေါရဲ့ ဆုပေးအပျခွငျးခံရတာမို့ နှဈဆပြျောခဲ့ရတယျလို့ ဆိုလာတဲ့ ဇာဏျခီ
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ City FM ပွဲမှာ မင်းသားဇဏ်ခီကတော့ တစ်နှစ်တာရောင်းအားအကောင်းဆုံး စတူဒီယိုတေးထုတ်လုပ်သူဆုကို ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ (၁၄)ပတ်တိုင်အောင် ရုံပေါ်က မဆင်းသေးဘဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ “Now & Ever ထာဝရနှောင်ကြိုး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ ရုံဝင်ငွေအများဆုံးရရှိနေပြီး အကယ်ဒမီဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်..။
ပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ချပြနိုင်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်တဲ့ ဇဏ်ခီကတော့ ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ တစ်နှစ်တာရောင်းအားအကောင်းဆုံး စတူဒီယိုထုတ်လုပ်သူဆုကို ရရှိခဲ့တာကြောင့် အတိုင်းမသိ ပျော်ခဲ့ရပြီး လေးစားအားကျရတဲ့ Idol ရဲ့ ဆုပေးအပ်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်း ပိုပျော်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို “Special night..နှစ်ဆဝမ်းသာရပါတယ်။ပထမအချက်က ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအခွေအနေနဲ့ဆုရတဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်ကပေးတဲ့ဆုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အနုပညာဖန်တီးမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပရိတ်သတ်တွေ အများကြီးပိုတိုးလာဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက် ကျနော်ပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ကျနော့်ရဲ့ idol ကကျနော့်ကိုဆုပေးအပ်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်လို့မဆုံးပါဘူး။ ကိုညီထွဋ်က ၁၉၉၀ အကျော်ဝန်းကျင်လောက်မှာ စကားတစ်ခွန်းပြောခဲ့တယ် interview တစ်ခုမှာ။ “ကျွန်တော်သူများအင်္ကျီငှါးမဝတ်ချင်တော့ဘူး” တဲ့။ အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်း copy လုံးဝမဆိုတော့ဘူး။ သူမပြောသေးခင်အချိန်အထိ copy ဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူး။
သူ့စကားကြောင့်အသိတရားတစ်ခုရသွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း idol အနေနဲ့သတ်မှတ်တာပါ။ မနေ့ညကကျေးဇူးတင်စကားထဲမှာကျန်သွားခဲ့တဲ့ Bo Bo Entertainment ကိုလည်း အခုဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Now & Ever OST တစ်ခွေလုံးအတွက် mixing နဲ့ mastering ကို Apollo Lab (Bangkok) မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Apollo Lab က mixing and mastering engineer တွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။
တစ်ဖန်ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ original အခွေတွေကို ဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါလို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့စောင့်ထိန်းမှုဟာ အနုပညာသမားတွေရဲ့အနာဂတ်ပါ။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ထားတဲ့သစ္စာတရားကြောင့် အနုပညာသမားတွေဟာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကို များများနဲ့ကောင်းကောင်း ပြန်လည်ချပြခွင့်ရကြပါမယ်။
အတူတူကြိုးစားစောင့်ထိန်းမှ ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ healthyဖြစ်တဲ့ internationalတန်းမှီတဲ့ အနုပညာတွေဖန်တီးနိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေဖက်ကလည်း ကိုယ်ဝန်းရံတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကျိုးရှိမယ့်ပုံစံမျိုးနဲ့အားပေးပြီး အနုပညာရှင်တွေဖက်ကလည်း စီးပွါးရေးမဆန် trend ထဲမှာပဲအမြဲမနေပဲ တကယ့်အနုပညာစောင်းပေး ရင်တွင်းဖြစ်တွေကိုများများဖန်တီးကြပါလို့ အခါအခွင့်ရတုန်း နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။Last but not least!! CityFM ကိုလည်းဆုချီးမြှင့်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။” ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်တဲ့စာလေးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ အပျော်လေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်က တစ်ဆင့် မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်..။
Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း တစ်နှစ်တာရောင်းအားအကောင်းဆုံး စတူဒီယိုတေးထုတ်လုပ်သူဆုကို ရရှိသွားတဲ့ မင်းသား ဇဏ်ခီအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားလေးပြောသွားပါဦးနော်..။
Source: Zen Kyi’s Facebook
Sakura(CeleConnections)
ဖဖေျောဝါရီလ (၁)ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ City FM ပှဲမှာ မငျးသားဇဏျခီကတော့ တဈနှဈတာရောငျးအားအကောငျးဆုံး စတူဒီယိုတေးထုတျလုပျသူဆုကို ရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..။ (၁၄)ပတျတိုငျအောငျ ရုံပျေါက မဆငျးသေးဘဲ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ “Now & Ever ထာဝရနှောငျကွိုး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးဟာ ရုံဝငျငှအေမြားဆုံးရရှိနပွေီး အကယျဒမီဆနျကာတငျစာရငျးထဲမှာလညျး ပါဝငျနပေါတယျ..။
ပရိသတျတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးတှကေိုသာ ခပြွနိုငျအောငျ ကွိုးစားလုပျဆောငျတတျသူဖွဈတဲ့ ဇဏျခီကတော့ ပရိသတျတှပေေးတဲ့ တဈနှဈတာရောငျးအားအကောငျးဆုံး စတူဒီယိုထုတျလုပျသူဆုကို ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အတိုငျးမသိ ပြျောခဲ့ရပွီး လေးစားအားကရြတဲ့ Idol ရဲ့ ဆုပေးအပျမှုကို ခံခဲ့ရတဲ့အတှကျလညျး ပိုပြျောခဲ့ရတဲ့အကွောငျးကို “Special night..နှဈဆဝမျးသာရပါတယျ။ပထမအခကျြက ရောငျးအားအကောငျးဆုံးအခှအေနနေဲ့ဆုရတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျတှနေဲ့တိုကျရိုကျသကျဆိုငျပွီးတော့ ပရိတျသတျကပေးတဲ့ဆုလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ အနုပညာဖနျတီးမှုကိုတနျဖိုးထားတဲ့ပရိတျသတျတှေ အမြားကွီးပိုတိုးလာဖို့လိုအပျနတေဲ့အတှကျ ကနြျောပွောသငျ့တဲ့စကားတှပွေောခှငျ့ရခဲ့တယျ။
ဒုတိယအခကျြကတော့ ကနြေျာ့ရဲ့ idol ကကနြေျာ့ကိုဆုပေးအပျတဲ့အတှကျ ဂုဏျယူ ဝမျးသာ ပီတိဖွဈလို့မဆုံးပါဘူး။ ကိုညီထှဋျက ၁၉၉၀ အကြျောဝနျးကငျြလောကျမှာ စကားတဈခှနျးပွောခဲ့တယျ interview တဈခုမှာ။ “ကြှနျတျောသူမြားအင်ျကြီငှါးမဝတျခငျြတော့ဘူး” တဲ့။ အဲ့ဒီ့နောကျပိုငျး copy လုံးဝမဆိုတော့ဘူး။ သူမပွောသေးခငျအခြိနျအထိ copy ဆိုတာ မကောငျးဘူးဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူး။
သူ့စကားကွောငျ့အသိတရားတဈခုရသှားခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး idol အနနေဲ့သတျမှတျတာပါ။ မနညေ့ကကြေးဇူးတငျစကားထဲမှာကနျြသှားခဲ့တဲ့ Bo Bo Entertainment ကိုလညျး အခုဒီနရောကနကြေေးဇူးတငျကွောငျးပွောကွားခငျြပါတယျ။ ပွီးတော့ Now & Ever OST တဈခှလေုံးအတှကျ mixing နဲ့ mastering ကို Apollo Lab (Bangkok) မှာလုပျခဲ့ပါတယျ။ Apollo Lab က mixing and mastering engineer တှကေိုလညျးအထူးကြေးဇူးတငျကွောငျးမှတျတမျးတငျအပျပါတယျ။
တဈဖနျကြေးဇူးတငျခငျြတာကတော့ original အခှတှေကေို ဝယျယူအားပေးခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျတဈဦးတဈယောကျခငျြးကို ကြေးဇူးကမ်ဘာပါလို့ ပွောကွားလိုပါတယျ။ ပရိတျသတျတှရေဲ့စောငျ့ထိနျးမှုဟာ အနုပညာသမားတှရေဲ့အနာဂတျပါ။ ပရိတျသတျတှရေဲ့ထားတဲ့သစ်စာတရားကွောငျ့ အနုပညာသမားတှဟောလညျး ကောငျးမှနျတဲ့အနုပညာဖနျတီးမှုတှကေို မြားမြားနဲ့ကောငျးကောငျး ပွနျလညျခပြွခှငျ့ရကွပါမယျ။
အတူတူကွိုးစားစောငျ့ထိနျးမှ ဂုဏျသရရှေိတဲ့ healthyဖွဈတဲ့ internationalတနျးမှီတဲ့ အနုပညာတှဖေနျတီးနိုငျကွမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျတှဖေကျကလညျး ကိုယျဝနျးရံတဲ့အနုပညာရှငျတှအေကြိုးရှိမယျ့ပုံစံမြိုးနဲ့အားပေးပွီး အနုပညာရှငျတှဖေကျကလညျး စီးပှါးရေးမဆနျ trend ထဲမှာပဲအမွဲမနပေဲ တကယျ့အနုပညာစောငျးပေး ရငျတှငျးဖွဈတှကေိုမြားမြားဖနျတီးကွပါလို့ အခါအခှငျ့ရတုနျး နှိုးဆျောအပျပါတယျ။Last but not least!! CityFM ကိုလညျးဆုခြီးမွှငျ့တဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျရှိပါတယျ။” ဆိုပွီး ကြေးဇူးတငျတဲ့စာလေးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ အပြျောလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါက တဈဆငျ့ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ..။
Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး တဈနှဈတာရောငျးအားအကောငျးဆုံး စတူဒီယိုတေးထုတျလုပျသူဆုကို ရရှိသှားတဲ့ မငျးသား ဇဏျခီအတှကျ ဂုဏျပွုစကားလေးပွောသှားပါဦးနျော..။